NDI UWEOJII NA-AGBA SARAKI UME ISOPURU ÒKÙ O KPORO MA O BU CHEE NJIDE EJIDERE
Home wendover casino casino games best odds of winning blackjack
Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uweojii na Nigeria (NPF) kwere nkwa ijide President Senate, Bukola Saraki, ma ọ bụrụ na ọ kwadoghị òkù ọ kpọrọ maka ihe mgbagwoju anya ya dị na njide ohi nke Offa.
Ndị uweojii kpọrọ Saraki ka ọ gaa n’ihu ịjụ ajụjụ na Onfa bank robbery ụnyaahụ (Tuesday, July 24, 2018).
Ma Onye isi oche nke Senate leghaara òkù ahụ anya ma gaa Nnọkọ Mgbakọ n’agbanyeghị mkpọchi nke ndị agha ya site n’aka ndị ọrụ nchekwa na ụlọ obibi Abuja.
Otu onye na-ahụ maka ndị uwe ojii (FPRO), Jimoh Moshood, ekweghị na-akwado ụlọ obibi nke Saraki dika ebubo.
Otu onye isi na-ahụ maka ndị uweojii (IGP), Ibrahim Idris, kwuru na ụnyaahụ kwuru, sị: “Onye isi obodo ahụ ga-asọpụrụ òkù ndị uweojii; ma ọ bụghị na ike ahụ agaghị ala azụ iji ihe nile nke iwu iji hụ na iwu na-akwado ya. ”
“Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uweojii na Nigeria na July 23, 2018 kpọkuru onyeisi oche nke Senate, Federal Republic of Nigeria, Bukola Saraki, ka ọ kọọrọ onyeisi ụlọ ọrụ nyocha na Nzaghachi Ọrụ Nyocha na Guzape nkwụsị, Asokoro Extension, Abuja na July 24, 2018. na 8am maka nyocha ọzọ.
“Nke a bụ n’ihu n’ihu ikpe ya site na nkwupụta nkwupụta nke ndị isi ise ndị omempụ jidere n’ihi na ha keere òkè n’ọdụ ụgbọ mmiri Offa na igbu ọchụ na-atụ egwu nke ihe karịrị mmadụ 31 ma na-ebubata rifles AK47 21 n’April 5, 2018.
“Ma Saraki jụrụ ịsọpụrụ oku òkù ndị uweojii n’oge ọ bụla a tọhapụrụ ya,” ka nkwupụta ahụ na-agụ ọzọ.
Jimoh kwusiri ike na ndị uweojii na-ahụ maka mgbasa ozi bụ ndị nọ na ndị isi oche nke ndị isi oche na ndị ọzọ tinyere ya.
“Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uweojii na Naijiria na-adọrọ mmasị na nke a na ụtụtụ n’oge ụnyaahụ na ụfọdụ ndị uweojii gbara gburugburu ebe obibi Saraki.
“Agụmakwụkwọ ahụ chọrọ ikwu na ọ kwadoghị nnyefe nke ndị uweojii na ụlọ nke onye isi oche ma ọ bụ Ekwerenmadu dịka akọwara ya na mgbasa ozi.
“Otú ọ dị, IGP eduziwo nchọpụta nke ọma banyere okwu ahụ iji chọpụta ihe kpatara ya n’ihi na ndị uweojii agaghị ekwe ka ihe mkpofu a gbagọọ ikpe ziri ezi.
“Ndị uweojii na-ahụ maka ndị uweojii na Nigeria ga-eme ka iwu kwadoro n’okwu a,” ka nkwupụta ahụ gbakwunyere.
Tags: BUKOLAhotihenemeIHENEME NOBODOihenemenobodoIsimbidoISIMBIDO POSTisimbido postsisimbidopostISIMBIDOPOSTSISIMBIDOTVLATESTnewnewsNIGERIANIGERIANnobodopostpostspresidentSARAKIsenateupdate
APC WEE MAA JIJIJI N'IHI NNWERE ONWE NKE SAMUEL ORTOM NA PDP